Umatshini we-Inc Atnc Cnc, umatshini iWoodworking Atc Cnc, umatshini wokusika i-Cnc- JCUT
Ifunyenwe eJinan, kwiPhondo leShandong, eJinan JCUT CNC Equipment Co, Ltd. (JCUT-CNC) lishishini eliphakamileyo le-CNC elisebenzisa ipaneli (eyenziwe) ...
Iimveliso zethu zibandakanya ukulayisha ngokuzenzekelayo kunye nokukhuphela umatshini wokusika we-CNC, iinkqubo ezine zokusika umatshini wokusika i-cnc, umatshini we-innc ATCnc ...
Umgangatho ophezulu, ubuchwephesha obutsha, ubuchwephesha obutsha, kunye nenkonzo elungileyo emva kwentengiso. Nikeza ngezixhobo ezikumgangatho ophezulu kunye ne-CNC eziphezulu zehlabathi zokubhala emhlabeni.
Inkcazo ngomatshini 1. Ukusika, ukuthoba, ukubhoboza, ukukrola (imodeli elula). Ezi nkqubo zine zinokusetyenziselwa ukusika iikhabhathi kunye nokwenza umnyango wekhabhathi. Sebenzisa inkqubo yokutshintsha yesixhobo esizenzekelayo, inkqubo ngokuzenzekelayo iphumeza iimfuno zokuqhubekeka ngaphandle kokungenelela. Ii-spindles ezininzi zisebenza ngaxeshanye, ukuphucula ukusebenza ngempumelelo. 2. Ifakwe itafile ye-adsorption yetafile, impompo inokulungisa ngokufanelekileyo izixhobo ze-adsorb ezahlukeneyo ...
Ukuchazwa koomatshini 1. Izixhobo ezilishumi elinambini zigcinelwe ukutshintsha izixhobo ezikwelayini ezenzekelayo, kunye nezixhobo ezilishumi elinambini zinokutshintshwa ngokukhululekileyo ukuze zihlangabezane nemisebenzi enamandla yokwenza. 2. Kuhlalutyo lokugqibela, izibonelelo ze-lamino opener ziziswa yinkqubo yokuhlangana ye-lamino engabonakaliyo enokuthi iqhubekeke. Izibonelelo zonxibelelwano olungabonakaliyo lwe-lamino zenza ukuba ukuvulwa kwe-lamino kuthandwe ngokubanzi. Xa kuthelekiswa nezinye iindlela zonxibelelwano ezingabonakaliyo, indlela ...
Inkcazo ngomatshini 1. Oomatshini abane-automatic yokusika kunye nokuvula umatshini kwenzelwe abathengi ukuphucula ukusebenza. Iintloko ezine zilawulwa ziisilinda kwaye zinokutshintshwa ngokungxama, ezinokugqibezela ngokulula iinkqubo ezininzi ezenziwe ngumthengi (ukuqhubekeka kokusebenza kufuna inguqu yesixhobo ngaphakathi kwezixhobo ezi-2-4), Ogcina inguquko yesitshixo esisisidudla phakathi kwaye Ilungele iimveliso zenkqubo ezahlukeneyo ekwenzeni iminyango yamaplanga, ifenitshala kunye nemis ...
Inkcazo ngomatshini 1. Ixabiso eliphantsi kakhulu: lilungele iifektri ezincinci kunye eziphakathi. Nditsho nomatshini wokuchwetheza ongaphezulu kwe-12-30 amawaka e-CNC, kunye nexabiso eliphantsi xa kuthelekiswa nemodeli ebhegi. Khetho olufanelekileyo kwimizi mveliso yefanitshala enoxinzelelo olukhulu lwezezimali. 2. Iphaneli yecango lekhabhathi yokusetyenziswa kabini: Ukusuka kumbono wokubumbeka, iinkqubo ezine zezemodeli elula yokutshintsha isixhobo, esebenzisa isalfini ezine ukubona ...
Umatshini Inkcazo 1. Ukusebenza ngokuphezulu: iiMotor ze-spindle ezininzi zisebenza ngaxeshanye, zinokugqibezela ukuqhubekeka kweemveliso ngobuninzi. Inkqubo yotshintsho lwesixhobo esizenzekelayo, akukho longenelelo ngesandla, inkqubo yenziwe ngokuzenzekelayo. Sebenzisa itafile ye-vacuum ye-adsorption yamazwe aphesheya, ixhotywe ngompu vacuum enomthamo oqinileyo we-adsorption, uyilo olu-zone, ukuqina kwe-adsorption yeendawo ezahlukeneyo zezixhobo, kuphucula kakhulu ukusebenza kakuhle. Ukukhawuleza ...
Inkcazo ngomatshini 1. Lo matshini usebenzisa i-GDZ okanye i-HQD brand Air Hearing Spindle. I-9kw amandla aphezulu espali, ukusebenza ngempumelelo komgangatho. Sebenzisa inkqubo yokutshintsha yesixhobo esizenzekelayo, utshintsho olukhawulezileyo lwesixhobo. 2. Ifakwe i-servo motor, iigiya zokuchaneka okuphezulu kunye ne-rack drive engeniswayo, eyenza ukuba umatshini usebenze ngokuzinzileyo, ngengxolo ephantsi, isantya esikhawulezayo kunye nokuma okuphezulu kokuchaneka. 3. Ubhedi obunzima bokugungxula okugugileyo (imitha emihlanu yokugaya ukuchaneka ngokuchanekileyo 0.02mm). Inkqubo yokwenza imeshini yebhedi evumelanayo ...
Ukuchazwa koomatshini 1. Uzinzo lobume: iyonke intsimbi yentsimbi ibotshwe kunye, ethi iphathwe yintshukumo (isheyiphu) yokwaluphala, kwaye kungabikho lutshintsho emva kokusetyenziswa kwexesha elide. 2. I-Taiwan Syntec yenkqubo yokulawula ukusebenza kwemizi-mveliso ephezulu, enomgangatho ozinzileyo ogqibeleleyo, ulondolozo olulungileyo, inokulawula ukugqitywa kokulungiswa kwamacwecwe e-3D amaninzi, ngokukhawuleza, ukuqhutywa okuthe tye kwe-3D, ukuzoba nokusika. 3. Spindle motor ingeniswe ivela e-Itali HSD yamandla aphezulu isixhobo somoya opholileyo, ukuchaneka okuphezulu, ...
Inkcazo ngomatshini 1. Ukwenza iblanking, ukuntywila, ukusika, ukukhokela, ukugaya, njl, njl. 2. Ukulawulwa koyilo loyilo lokulinganisa, ukusebenza kwesidenge, abaqhubi banokuba semsebenzini emva koqeqesho olulula, akukho mfuneko yabasebenzi abasebenza ngochwephesha.Umatshini ushukuma ngokunganyanzelekanga, ukusebenza ngempumelelo kuphezulu, kukunceda uqaphela ukuleqeka kwemveliso. Umatshini wamkela i-HQD yamandla aphezulu okomoya opholileyo, osebenzisa ngokupheleleyo ...
Umatshini wokusika we-CNC, owaziwa njengezixhobo ezifanelekileyo zemveliso yefenitshala. Njengoko igama lisitsho, zonke iinkqubo zokulayishwa, ukusika, ukumba umngxunya ngokungqengqeleki kunye nokungabikho kwephaneli kugqitywa kwindawo enye. Ibeka endaweni eyiyo imveliso yemanyuwali kunye nokusebenza. Ke, yintoni ...
Ulwazi lokugcina umatshini we-JCUT CNC
Ingxaki yendabuko yile: 1. Umatshini wokufaka engakhange ugcinwe: isikhombisi sesitayile sesilayidi sibunjiwe kakuhle, isantya somatshini siyacotha, ukusebenza komsebenzi akulunganga, ubomi boomatshini abukho mgangathweni, izembe le-Z libambekile, umdaniso imposiso inkulu, kwaye i-angle yokukhetha ayilungile! Umqhubi ...
R9 uthotho CNC umatshini wokuqhuba R9 uthotho CNC umatshini wokuqhuba: Umatshini osebenzayo: ukusika i-punot kungasetyenziselwa ukuqhubekisa uhlobo lwebhodi ifanitshala yokuhamba yokubonisa imodeli yokucwangcisa ikhabhathi yomnyango igumbi lokuvala umnyango iphakheji ethambileyo yokwenene inkuni ingaphakathi ucango oluqinileyo lwefanitshala yefanitshala. I-R7 uthotho lwe-CNC ...